Miyuusan leben ama midab midab leh “burburin” nalalka eexda saxda ah? - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Waxaan helnay su'aashan wax badan, waxaanan rabaa inaan aragti ka dhiibto.
Marka hore, aan idhaahdo haddii aad tahay fiidiyoow midabayn midab leh, waxaad gabi ahaanba dooneysaa inaad xakameyso inta badan deegaanka aad yeelan karto. Tan waxaa ka mid ah rinjiga muraayadaha-fiiqan iyo xakamaynta iftiinka - yacni malaha wasakhda iftiinka ee daaqadaha, dhalaalka iftiinka LED ee qalabka, iwm.
Hadda, iyada oo taas laga baxo, waxaa jira waqtiyo gabi ahaanba tan aysan suurtagal ahayn, iyo midabyo badan ayaa ii sheegay ka shaqeynta qolalka hoteelka ama, dhawaanahan sababo faafida, guriga.
Waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo waxyaabo yar oo badan oo naga mid ah si caqligal ah u yaqaan:
Uma simi doonno TV midabka rinjiga qolka. Waxaan u xisaabineynaa D65, taas oo ah waxa barta cad ee iftiinka ay tahay inay ahaato.
Midabka rinjiga saameyn badan kuma yeesho midabka iftiinka laakiin midabka iftiinka wuxuu saameyn ku yeelanayaa sida saxda uu rinjiga noogu muuqdo.
Ka fikir naadiga habeenkii ama xafladaha leh laydhadh midab leh. Waxaa jira farqi aad u weyn oo u dhexeeya joogitaanka qol cad oo leh iftiin casaan ah iyo qol midab casaan leh oo iftiin cad leh. Darbiyada waxaa laga yaabaa inay umuuqdaan kuwo u eg midab isku mid ah, laakiin wax kasta oo kale oo qolka ku jira waxay u muuqdaan kuwo si weyn u kala duwan.
Si fudud u dheji, nalalka casaanka hoostiisa, wax kasta oo qolka ku jira waxay u muuqan doonaan casaan. Maqaarkaagu wuxuu u ekaan doonaa casaan, dharkaagu wuxuu u ekaan doonaa casaan, iyo wax kasta oo ka hooseeya nalalka cas waxay u muuqan doonaan casaan.
Dhinaca kale, haddii aan ku jirno qol leh midab casaan ah iyo ilo iftiin cad ah, tani xaalku ahaan maayo (illaa mooyee darbiyadu leeyihiin meel aad u sarreeya milicsiga maldahan - ka fikir muraayad midab-casaan ah ama xitaa midab casaan dhalaalaya, sida baabuur isboorti).
Xitaa waad istaagi kartaa dhanka midig derbiga guduudan oo iftiinka cad ayaa kuugu soo kici kara adiguna waad sameyn doontaa weli uma muuqan casaan (haddii aad runti aad uxun tahay qorax mooyee ama aadan cunin cunno aad u basbaassan! Hagaag, raali ahaw ...)
Waxaan ka wada hadlayaa laba shay oo kala duwan. Midka hore waxaa loogu yeeraa la qabsiga koromatikada kan labaadna waa aragtida midabka ka soo horjeedka.
Waxaan ula jaanqaadaynaa midabka iftiinka ee hareerahayaga si dhakhso leh u maraya habka loo yaqaan la qabsashada chromatic taasina waa nidaam ka duwan kii hore geedi socodka ka soo horjeeda midab (midab wareega) aragti ahaan. Labadan waxyaaloodba way socdaan, laakiin la qabsashada chromatic-ga ayaa ka badbadisay doorka markii la daawanaayay muuqaalka gudbinta, sida TV-ga ama kormeeraha.
Asal ahaan, waxaan fiirineynaa TV anaga oo aan badalin xagalkeena si isdaba joog ah, sidaa darteed ka soo horjeedka-geedi socodka runti saameyn kuma yeelanayo sawirka maxaa yeelay haddii aad la qabsato darbiga buluuga ah, waxay inta badan saameyn ku yeelaneysaa aragtidaada ku dhowaad shaashadda oo aan ahayn shaashadda lafteeda.
In ka badan midabka rinjiga, waxaad la jaanqaadi doontaa midabka iftiinka qolka ee nalalka eexda sida isha kaliya ee iftiinka.
Ka fikir tan: intee in le'eg ayuu rinjiga saameyn ku yeelanayaa TV-ga nalalka kale ee uu shidan yahay? Tani runti kama duwana. Iftiiminta eex ku habboon waa inaysan noqon wax ka badan isha iftiinka barta cad ee saxda ah meesha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Waxaa jira waxyaabo kala duwan oo dhacaya markaan TV-ga ka daawaneyno qolka nalka ku hareeraysan.
Ka soo horjeedka aragtida midabka habka - Tusaale: Suuqleydu waxay calaamado cagaaran ku dul ridayaan maraqa yaanyo si ay maraqa ugu muuqdaan kuwo casaan / bislaaday. Ku dhaygag sawirka calanka Mareykanka muddo 30 ilbiriqsi ah oo gadaal fiiri oo waxaan aragnaa sawir-xumo ka soo horjeedda:
La qabsashada Chromatic - Waxaan la jaanqaadaynaa laydhkeena. Haddii aan fiiriyo taleefankayga oo ka hooseeya 3000K guluub ama shumac, shaashadda waxay umuuqataa mid dhalaalaya iftiinka diiran waxayna u egtahay magenta hoosta tayada hoose, iftiinka cagaaran. Haddii aad haysatid qalab macruuf ah oo tufaax cusub ah, daar oo daar truetone si aad u aragto sida taleefanka (iyo adiguba) ula jaan qaadayaan laydhka, oo aan u ahayn midabka dharka ama rinjiga qolka ku jira.
Is-beddelka metamerism / CRI-ga hooseeya (tusmada muujinta midabka) ilaha iftiinka - Waxaan si liidata ugu aragnaa iftiinka CRI hooseeya. Waxaan sifiican u arki karnaa hoosta daciifka, iftiinka sare ee CRI marka loo eego iftiinka hooseeya-CRI. Ka feker khaldashada sharaabaadyada buluuga iyo madow hoos nalka xun.
Eeg sida nalka cad uu uga soo fuulayo darbigaaga buluuga ah saqafka cad. Kama arkaysid muraayad buluug saqafka dushiisa. Tani way ka duwan tahay haddii aad iftiinka buluugga ah uga muuqato darbi buluug ama caddaan ah oo ku yaal saqafka cad.
Midabka rinjiga ayaa ka saameyn yar midabka iftiinka. Tani macno ayey leedahay. Uma simi doonno TV midabka rinjiga qolka. Waxaan u xisaabineynaa D65, taas oo ah waxa barta cad ee iftiinka ay tahay inay ahaato.
Haddii aan isku dayno inaan "ku saxno" midabka darbiga annagoo iftiin casaan ah ka saareyno darbiga buluuga ah, runti ma cirro yeelan doonno (dusha sare kama tarjumeyso iftiinka buluuga ah. Taa bedelkeed, mugdi baa kugu soo dhacaya). Si kastaba ha noqotee, rinjiyeyaashu maaha kuwo casaan ama buluug ah. Waxay ka kooban yihiin isku darka midabbo. Haddii aan isku dayno inaan ku saxno midabka darbiga midab khafiif ah oo ka soo horjeedda, waxaan ku dambayn doonnaa iftiin aan sax ahayn oo aakhirka aan la qabsan doonnaa, taas oo ka dhigaysa muuqaalka mid qaldan.
Waxaas oo dhami waa waddo dheer oo la dhaho haddii aad leedahay midab beige ah, budo huruud ah, cagaar khafiif ah ama buluug ah, waxay si la yaab leh saameyn yar ugu leeyihiin barta cad ee iftiinka qolka. Iyo, haddii aad leedahay gidaarro midab leh, sida dad badani yeelaan, laydhadh sax ah ayaa weli cabiraya meel aad ugu dhow D65 meeshii aad fadhiisan lahayd.
Si kastaba ha noqotee, markaad rinjiga ku rinjin karto derbiyada, waxay runtii kuu oggolaaneysaa muuqaalkaaga inuu iftiimiyo, oo haddii aad tahay xirfadle midab-yaqaan, waxaad si cad u dooneysaa xakamaynta ugu badan ee deegaankaaga.
article Previous Dherer intee le'eg ayaa loo baahan yahay TV-ga?
Next article Indhaha Cadaadiska iyo OLED: Runta ayaa ah inay taas ka sii Daran tahay